I-Raw Garcinia cambogia powder powder (90045-23-1) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / I-Fat Loss powder / Garcinia cambogia ikhuphe umgubo
Akukho kalo SKU: 90045-23-1. Udidi: I-Fat Loss powder
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Garcinia cambogia powder powder (90045-23-1), phantsi komgaqo weCGMP kunye nokulawulwa kwekhwalithi ephezulu.
I-Garcinia cambogia i-powder powder Yenziwe kwiziqhamo ze-tamarind kwaye isetyenziswa kwizongezo ezininzi ezithengiswa njenge-weight-loss powder eluhlaza. IGarcinia Cambogia sisityalo esikhule kakuhle eIndiya naseAsia kangangeenkulungwane. I-Garcinia Cambogia yithanga elincinci njengeziqhamo ngoku ezifumana amandla kunye nezazi zokutya zaseNtshona kunye neengcali zokutya ekusebenziseni kwendalo.
I-Garcinia cambogia i-powct powder ividiyo
I-Raw Garcinia cambogia i-powt powct basic Characters
igama: I-Garcinia cambogia i-powder powder
Ifomula yeMolekyuli: C16H21BrClNO4
umbala: I-Botanicals, i-Powders kunye ne-Extracts, iiMveliso zeNdalo
I-Raw Garcinia cambogia i-powder powct in weight loss cycle
I-Garcinia cambogia i-powder powder (i-CAS 90045-23-1), i-HCA, i-Garcinia cambogia, iGambooge, iMarbar Tamarind, i-Goraka, iBrindle Berry, iBrindall Berry
I-Raw Garcinia cambogia i-powder Usetyenziso
Ukuba unqwenela ukuba ufuna ukuzama ukuthatha i-GC ukulahlekelwa kwesisindo okanye ezinye izibonelelo, yile nto okufuneka uyiqonde malunga neengcombolo zemiyalelo yeemveliso eziqulethe i-HCA:
(1) Izifundo ezisebenzisa i-GC zisebenzise uluhlu olubanzi lweedosi, naphi na ukusuka kwigrama enye ukuya kwi-2.8 yeegram mihla le. Iidosi eziqhelekileyo zihlala phakathi kwe-250-1000milligrams ngosuku.
(2) Ixesha lokufunda liye lahluka ngokubanzi, ukusuka ekusebenziseni i-GC phakathi kwembini ukuya kwii-12 kwiiveki ngexesha.
(3) I-dose ephezulu ye-HCA okwamanje ingaziwa. Akucaci ukuba umlinganiselo we-HCA ophezulu uthetha ukuba nokuhlaziywa okuphezulu kwe-HCA kuye kwagqitywa.
(4) Kubonakala kubakho ukulungelelaniswa okukhulu phakathi kwe-HCA kunye nokulahleka komzimba, oku kuthetha ukuba amayeza aphezulu anemiphumo engaphezulu.
(I-5) I-Garcinia cambogia iyaqhubeka iyincediso esetyenziswa kakhulu kwizifundo zokubonelela i-HCA, nangona ngaphandle kwe-GC, i-HCA ingafumaneka nakwiimveliso ezenziwe kwi-Hibiscus subdariffa.
(6) Ngenxa yokuba ezininzi zophando ziphandile imiphumo yeGC ezithathiweyo malunga neiveki ezisibhozo, abaphandi bakholelwa ukuba oko "ekufutshane kakhulu ukuvavanya imiphumo ye-HCA kwisisindo somzimba."
Ukuphambuka kwicala elikhuselekileyo, thintela ukuthenga i-garcinia cambogia "iifomula" okanye "ukudibanisa ukuxuba," okungenakukwazi ukubika zonke izithako ezibandakanyiweyo okanye ezichanekileyo zeHCA. Zininzi iifomula zephathiswa zenziwe ngabavelisi abasebenzisa i-fraction ye-mixti esebenzayo okanye i-dose ejwayelekile ukuze kugcinwe iindleko. Njalo ufunde iilebula uze ukhangele amagama athi "i-garcinia cambogia ecocekileyo (CAS 90045-23-1)" kunye "ne-hydroxycitric acid (okanye i-HCA)" (oku kufuneka kube malunga neepesenti ze-50 kwi-60 ekhulwini yemveliso). Ukuba uthengela umxube kwaye ubone isithako esibhalwe ngaphandle kwesixa, ingaba liflegi ebomvu ongazi kakuhle oko ufumanayo.
Isilumkiso kwiRaw Garcinia cambogia i-powder powder
Nangona abanye abantu bathi bangaboni nayiphi na imiphumo kwi-GC, abanye baye bafumana amava ahluke kakhulu. Nantsi enye i-akhawunti ephazamisayo malunga nokusetyenziswa kwe-Garcinia cambogia i-powder powder okungenakukuvakala ngayo: Igalelo elincinci kwizigulane ezininzi zikhupha esibhedlele ngenxa yokungaphumeleli kwesibindi kunye nokudinga ukunyuka kwesibindi.
Inqaku le-2016 elipapashwe yiZiko loTshintshiso kwi-Clinical Mayo libika ukuba izigidi zabantu baseMerika zihlala zisebenzisa i-supplementary herbs, ngokuphindaphindiweyo kwifomu yepilisi, kodwa ayifumene nemiphumo yazo epheleleyo. Amachiza amaninzi alahlekelwa ngumzimba abeka ingozi efihlakeleyo kwaye "adibene ne-hepatotoxicity kunye nokulimala kwesibindi."
Kwimeko ye-garcinia cambogia, inokusetyenziswa ngokugqithiseleyo kwaye ayilawulwa kakuhle. Abanye abavelisi batusa ukuba bathathe amanqanaba aphezulu ngamaxesha amaninzi ngosuku. umzekelo i-30 kumzuzu we-60 ngaphambi kokutya kwesibhozo ukuya kwii-12 kwiiveki. Ngaphandle kokulimala kwesibindi, ezinye i-garcinia cambogia nemiphumo emibi engenzekayo iquka:
• nokuba ngumntu ongenasiphelo okanye obuthathaka
• ukukhathala kunye nenkohlakalo yengqondo
• ukukhupha isikhumba
• ukwandiswa kokubanda amaqanda / umsebenzi omzimba ophantsi
• yomisa umlomo nokuphefumula okubi
• Imiba yokugaya i-neusea, inkathazo yokutya okanye isifo sohudo
Enye into ekufuneka uyiqwalasele ngeGC yoluhlu olude lwayo lwentsebenzo yonyango / yeziyobisi. Abantu abaninzi kufuneka bagweme i-garcinia cambogia ngenxa yokuba ingachaphazela njani amanye amayeza, ukukhulelwa, amazinga okondla, ishukela legazi kunye nokunye. I-Garcinia cambogia inokusebenzisana kakubi kunye:
• ukukhulelwa nokuncelisa
• Iimeko ezikhoyo zesibindi okanye umonakalo wezintso
• amayeza athatyathwa ukulawula i-asthma kunye nokugula
• unyango lwesifo sikashukela kunye ne-insulin
• isongezelelo sesinyithi (ngokuqhelekileyo kuthathwa ngabantu abane-anemia)
• unyango lwamayeza
• imishanguzo esetyenziswa ukulawula iingxaki zengqondo ezifana nokuxhalaba nokuxinezeleka
• iziyobisi ze-statin ezithatha i-cholesterol ephantsi
• izidakamizwa zegazi ezinqabileyo (njenge-warfarin)
I-Garcinia cambogia i-powder powder yenziwe kwiqhamo le-tamarind kwaye isetyenziselwa kwiziqulatho ezininzi ezithengiswa njengesisindo-ukulahleka kwindoda eluhlaza.
I-Garcinia cambogia (GC) isisityalo esincinci, esinjengomquba esakhulayo kwi-Asia-mpuma ye-Asia ne-Indiya. Isisombululo esisisiseko esisisigxina se-garcinia cambogia yi-hydroxycitric acid (HCA), enokuphandwa ngophando oluthile lunokunceda abantu abathile banciphise umzimba.
Ukuhlaziywa kweGarcinia cambogia, iziphumo zophando kunye nobutyebi bokulahlekelwa kwesisindo ziye zaxutyaniswa ukuba zincinci. Kule ndlela inzuzo epapashwe kakuhle kakhulu yokusebenzisa i-garcinia cambogia yikwazi ukunyusa ukulahleka kwesisindo. Ezinye izimangalo eziqhelekileyo malunga nemiphumo ye-garcinia cambogia ziquka:
• ukulahleka kwesidlo okanye ngaphantsi komnqweno wokutya kunokuqhelekileyo
• Ukunciphisa izifiso zokutya okungenakudla ubomi, ezifana nokulutha kweswekile
• isimo sengqondo esilungileyo (kuquka ukuziva unwabileyo, unamandla ngakumbi kwaye unzima ukhathala)
• ukwandisa amandla kunye nokugxininisa
• amanqanaba eshukela egazini
• ukuphucula izibilini
• ukunciphisa iintlungu zomzimba
• ukuphucula ama-cholesterol
• unomnqweno onamandla wokusebenza
Uninzi lwamabango angentla aluxhaswanga zifundo zenzululwazi, nangona abanye banakho. Masihlole iingenelo ze-garcinia cambogia eneneni efanelekileyo kwaye ibonakala iyasebenza ngandlela-thile.
1). Ukuhla ukusinda
Ezinye iziphumo ziye zafumanisa ukuba i-garcinia cambogia inokuthi inokukwazi ukunceda ngexabiso eliphantsi lokulahlekelwa kweoli, kunye neminye inkxalabo yezempilo ekhankanywe ngasentla, nangona ukuphumelela kwayo kudla ngokuqinileyo. Ngokomzekelo, uphando lubonisa ukuba i-HCA isebenza ngokuthintela i-enzyme ethile ebizwa ngokuthi i-adenosine triphosphate-citrate-lyase, eyinceda ekwakheni iiseli ezinamafutha. Kodwa iifundo ngokuthelekiswa kweempembelelo zeGC kulawulo zifumene ukuba kunokuthi kwandise ukulahleka kwesisindo ngamanqaku angama-
Ezi ziphumo zichanekileyo abaphandi abapapashiweyo kwiNcwadi ye-Obesity kwi-2011. Xa befanisa abantu ababethatha i-Garcinia cambogia i-powder kwinqanaba labo abangenalo, umlinganiselo wobunzima wawuncinci kakhulu (ngokulinganayo malunga neepounds ezimbini). Ngaphezu koko, kwakungenako ukugqiba ukuba iGC yayijongene ngqo neepounds ezilahlekileyo.
Uhlalutyo lweemeta luhlaziywe iziphumo ezivela kwii-12 iindlela ezahlukahlukeneyo ezibandakanya i-GC kwaye zityhilela umlinganiselo omncinci, olwahlukileyo olwabalaseleyo ekulahlekeni kwesisindo esivumela ukusebenzisa i-garcinia cambogia iimveliso eziqulethe i-HCA ngaphaya kokusetyenziswa kwe-placebo. Nangona kunjalo, uhlalutyo lufumanise ukuba ezinye iingcaphephe zathintela iziphumo zecala lokugaya ("iziganeko ezinobungozi zesisu") zaziqhele kabini kwii-HCA ngamaqela afana ne-placebo.
Iziphumo ezivela kwizifundo ezahlukeneyo zokulahlekelwa kwesisindo ezibandakanya i-GC zixutywe kakhulu. Uphononongo olwodwa kwi-meta-analysis luchaza ukuhla kwehla kwinqanaba le-HCA eliqhathaniswa ne-placebo, iiphando ezimbini zibhekiselele ekunciphiseni okukhulu kwinqwelo e-visceral / i-fatcut / i-fat total areas kwi-HCA iqhathaniswa ne-placebo, kodwa ezinye izifundo ezimbini akufumananga umehluko omkhulu phakathi kwe-HCA kunye ne-placebo. Uphando olupapashwe kwiNcwadi ye-American Medical Association yabona ukuba i-GC esetyenziselwa iiveki ze-12 (i-1,500 milligrams dosage) "yahluleka ukuvelisa ukulahleka kwamandla kunye nokulahlekelwa kwexabiso elincinci ngaphaya kwento ebonwe nge placebo."
Isiphetho se-meta-analysis malunga ne-garcinia cambogia? Abaphandi bacacise iziphumo zabo ngokuthi "ubukhulu bemiphumo bubuncinane, kwaye ukufaneleka kweklinikhi akuqinisekanga. Uvavanyo oluzayo lufanele lube lukhuni ngakumbi kwaye lubhetele ngakumbi. "Umgca wokuba ukuba unzima ukunyusa umzimba, i-GC mhlawumbi ayiyi kuba yimpendulo, ngokubhekiselele kwizifundo zokuvavanywa nokulawulwa.
2). Ukunciphisa ukutya
Ucwaningo luye lwaphakamisa ukuba kunokwenzeka ukuba i-HCA efunyenwe kwi-garcinia cambogia inokunceda ekunciphiseni umnqweno womntu ngokunyusa umveliso we-neurotransmitter serotonin, ehambelana nokuzivala kunye nokuvuya. . Izifundo zezilwanyana zibonisa ukuba kunokukunceda nokwandisa inkcitho yamandla.
Qhubeka ukhumbule, nangona kunjalo, ukuba le nto ayinjalo kubo bonke abantu, kwaye kukho nezinye iindlela ezinokungabikho kancinci zokulawula ukutya kwakho kunye nokukhuthaza ukuveliswa kwe-serotonin (njengokutya ukutya okunokulinganisela kunye nokutya kwamaprotheni kunye namaxesha athile amaxesha. yonke imihla).
3). Cholesterol ephantsi
Kukho inkxaso ye-garcinia cambogia ekwazi ukuphucula amazinga e-cholesterol kunye ne-triglycerides ephezulu. Kwakhona unokukwazi ukunceda ukuphakamisa i-cholesterol ye-HDL "entle". Akukhuselekile ukuba umntu sele esele athathe imichiza echaphazela i-cholesterol, nangona kunjalo, nemiphumo yayo ayibonakali inokwethenjelwa okanye inamandla.
Izifundo ziye zafumanisa ukuba i-GC "ayinayo impembelelo ebalulekileyo kwimimiselo ye-anthropometric, i-REE, i-triglycerides okanye i-glucose level" kodwa ingaba nefuthe elincinci ekunciphiseni i-cholesterol. Khumbula ukuba kukho nezinye ezininzi iindlela zendalo zokuphucula amazinga e-cholesterol, kuquka ukusetyenziswa kunye nokutya ukutya okuninzi lwe-fiber ukusuka kwi-high-fiber foods like veggies, nuts, imbewu kunye nobhontshisi.
4). I-Blood Stabilized Sugar
Okokugqibela, kuthekani ngemiphumo yeCG kwizinga leshukela legazi? Olunye ubungqina lubonisa ukuba i-garcinia cambogia inokunceda ukulawula iswekile yegazi ngokuphucula indlela iiseli ezithatha ngayo i-glucose (ishukela) ukuze isetyenziswe amandla. Enye indlela ekunokuphucula ngayo ukulahleka kwesisindo kukukhuseleka kwee-enzyme ze-pancreatic alpha amylase, utshintsho kwi-intestinal alpha glucosidase kunye nokuguquka kwi-acety acid synthesis. Oku kunokwazi ukutshintsha indlela i-carbohydrates idibene ngayo.
Oku kunokunceda umzimba wakho uphendule kwi-insulin engcono, nangona ingavelisa umngcipheko wokuba neqondo eliphantsi lokushukela kwegazi kwabanye abantu, nabo. Ukuba unembali yeeshukela zegazi, unobungozi wesifo sikashukela okanye uthatha imishanguzo eguqula iimiphumo ze-insulin, i-GC inokwenza ukuba ushukela wegazi lakho litshise kakubi. Nangona oku kungabonakali ukuba kwenzeke kuwo wonke umntu othabatha i-GC, yinto enye enokuyiqwalasela kunye nento enokuxoxa ngayo nodokotela wakho.
I-Garcinia cambogia ikhupha i powder I-Raw Powder (i-CAS 90045-23-1)
I-Raw Garcinia cambogia i-powder powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Garcinia cambogia powder powder (CAS 90045-23-1) esuka kwi-AASraw
I-γ-Aminobutyric acid (GABA)